Maleeshiyada gooni-u-goosadka koofurta Yemen
Isbaheysigu waxay sheegeen in ay beegsadeen wax ay ku sheegeen khatar si toos ah ugu wajahan dowladda uu caalamka aqoonsanyahay ee uu hogaamiyo madaxweyne Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Ma cadda wali aaga ay sida gaarka ah u duqeeyeen ciidamada Isbaheysiga, hase yeeshee dadka deegaanka magaalada Aden ayaa wakaalada wararka AFP u sheegay, in ay maqleen dhawaaqa madaafiic ku dhacday xerooyinka milatari ee ay qabsadeen xoogaga gooni-u-goosadka ee magaala xeebeedka Caden.
Sabtidi shalay ayay maleeshiyada rabta in ay gobollada koofureed ee Yemen go’aan weerareen magaalada Caden oo hadda xarun ku meel gaar ah u ah dowladda madaxweyne Hadi. Meelaha ay qabsadeen ayaa waxaa ku jira xerooyinka milatariga iyo madaxtooyada.
Dowladda uu caalamka aqoonsanyahay ee madaxweyne Abd-Rabbu Mansour Hadi ayaa weerarka jabhaddani taageerada ku hesha Imaaraadka Carabta ku sheegay afganbi.
Qaramada Midoobay ayaa Axadda maanta ah sheegtay in dagaalka afarti maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada Caden, ay ku dhinteen dad gaaraya 40 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 260 ruux.